plugin Archives - Saturngod
Posted on Updated January 10, 2010 January 10, 2010 by saturngod
jQbox isajquery plugin for alert, confirm , html box. In Web 2.0 , we don’t want to use tradional alert, confirm box. So, I decided to write jQbox plugin. In my office, I always use popup insted of alert , confirm , upload, ajax , etc… So, I think, I should write plugin […]
Posted on Updated August 2, 2009 by saturngod
ဟန်လင်းဆိုတာကတော့ bookmarks site တစ်ခုပါ။ နာမည်ကျော် digg လို မျိုး site တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထူးတေဇာ က တည်ထောင်ထားတဲ့ site တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် အရင်ကတော့ ဟန်လင်း ကို google bookmarks လိုမျိုး firefox မှာ အသုံးပြုလို့ရအောင် ရေးခဲ့ဘူးတယ်။ အဲဒါကို ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ အခုတော့ wordpress plugin ရေးပြီးသွားပြီ။ MZ က ကောင်းကင်ပြာက သူ့ blog မှာ ထည့်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ plugin ကောက်ရေးလိုက်တာ။ WP-plugin က ရေးနေကျ မဟုတ်တော့ google အားကိုးနဲ့ အိုကေသွားတယ်။ မသိရင်တာ ရေးရခက်တာ။ အခုသိသွားတော့လည်း လွယ်သွားတာပဲ။ plugin ကို အောက်က link မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ http://www.saturngod.net/project/hanlinn.zip
Change Widget Plugin
Posted on Updated July 16, 2009 by saturngod
အရင်က Samsarin PHP Widget ကို သုံးတယ်.. ဒါပေမယ့် သူက 2.7 မှာ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး… theme လည်း ထွေထွေ ထူးထူးမပြောင်းဖြစ်တာလည်း ပါတာပေါ့.. အခု Samsarin PHP Widget ကို အသစ်ထည့်ချင်ထည့်လို့မရတော့ PHP coding တွေ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဘာရှိလဲဆိုတာကို ရှာကြည့်လိုက်တော့… Executable PHP widget ကို သွားတွေ့တယ်… သူကတော့တော့ လက်ရှိ version မှာ အလုပ်လုပ်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျာ..
Tag & Category Plugin
Tag & Category လုပ်ထားတာလေးကို လူတော်တော်များများ မေးကြတယ်။ သိချင်ကြတာတော့ တော်တော်များများပဲ။ ဘယ်သူမှ right click မနှိပ်မိကြဘူး။ နှိပ်ပြီး ရှာတော့လည်း ရှာမတွေ့။ ဒါကြောင့် တိုက်ရိုက် link လေးပေးလိုက်ပါတယ်။ http://wordpress.org/extend/plugins/wp-cumulus/ ကဲ… စိတ်ချမ်းသာကြပါစေသော်…… 🙂